Lehilahy frantsay 71 taona hiampita Atlantika amin'ny kapsily miendrika barila
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Lehilahy frantsay 71 taona hiampita Atlantika amin'ny kapsily miendrika barila
Savin dia niasa nandritra ny volana maro tao amin'ny sambo fitaterana sambo Ares any amin'ny morontsiraka atsimo andrefan'ny France. Savin dia 71 taona ary avy any Frantsa.
Niainga hiampita ny Atlantika izy ny Alarobia tamina kapsula voasary miendrika barila. Ny any Karaiba no tanjony dia te-hahatratra azy ao anatin'ny 3 volana ary ny heriny irery dia ny onjan-dranomasina.
“Mirefy iray metatra aho ary mifindra amin'ny roa na telo kilometatra isan'ora,” hoy i Jean-Jacques Savin tamin'ny masoivohom-baovao tamin'ny alàlan'ny antso an-tariby taorian'ny nialany tao El Hierro any amin'ireo Nosy Canary any Espana.
Gavin dia niasa am-paosin-tsambony nandritra ny volana maro tao amin'ny tokotanin'ny sambo kely Ares, morontsiraka atsimo andrefan'ny France.
Mirefy telo metatra (10 metatra) ny halavany ary 2.10 metatra ny sakany, vita amin'ny plywood vita amin'ny resin izy io, manamafy ny hery hanoherana ny onja sy ny mety ho fanafihan'ny trozona orca.
Ao anatin'ny kapsily, izay milanja 450 kilao (990 pounds) rehefa foana, dia misy toerana onenana enina metatra toradroa izay misy lakozia, fatoriana ary fitahirizana. Ny lavaka eo amin'ny gorodona dia mamela azy hitady trondro.
Parachutista miaramila taloha izay nanompo tany Afrika, Savin koa dia niasa ho mpanamory fiaramanidina sy mpiambina valan-javaboary.
Notehiriziny ny volan'ny foie gras sy tavoahangy misy divay fotsy Sauternes ho an'ny Taom-baovao, miaraka amin'ny tavoahangy Saint-Emilion mena ho an'ny fitsingerenan'ny faha-72 taonany tamin'ny 14 Janoary.
Manantena i Savin fa hitondra azy ho any Martinique na Guadalupe ny onja.
Eny an-dàlana, i Savin dia hametraka marika ho an'ny mpanadihady an-dranomasina iraisampirenena JCOMMOPS hanampiana ireo mpaka sary ranomasina mandinika ny onja ankehitriny.
Ary izy tenany ihany no ho lohahevitry ny fanadihadiana momba ny vokatry ny fitokana-monina ao am-ponja akaiky.
Na ny divay an-tsambo aza dia hohalalinina: mitondra Bordeaux izy mba hampitahana azy avy eo amin'ny iray notazonina an-tanety hamaritana ny vokatry ny volana maro atopatopan'ny onja.
Savin dia manana 60,000 euro (68,000 $ US) amin'ny diany.
Ny seranam-piaramanidina London Gatwick dia amidy 2.9 Miliara Pounds anglisy